Saturday October 13, 2018 - 19:21:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sida lagu xaqiijiyay war rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska Taliska guud ee Nabad sugidda Dowladda waxaa iscasilay Xuseen Cusmaan Xuseen oo ku magacaawnaa taliyaha sirdoonka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in taliyaha iscasilay uu maalmihii lasoo dhaafay cadaadisyo kala kulmayay siyaasiyiin iyo xildhibaanno katirsan DF-ka kuwaas oo ku dhaliilayay in uu waxka qaban waayay ammaanka Soomaaliya.
Tan iyo markii uu xilka qabtay Xuseen Xasan Cusmaan ayay magaalada Muqdisho ka dhaceen weeraradii ugu xooganaa uguna khasaaraha badnaa, xoogaga Al Shabaab ayaa dilal qorshaysan iyo qaraxyo ka geystay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir.
Sidoo kale taliyaha iscasilay ayaa shaqadiisa ku bilaabay qulqulatooyin iyo khilaaf kadib markii uu shaqada ka eryay laba kamid ah ku xigeennadiisa oo uu ugu caansanaa Cabdalla Cabdalla waxaana lajabsaday Keydadkii sirdoonka DF-ka.
Sanad walba Nabad sugidda ayaa yeelata Taliye cusub iyo ku xigeennadiisa, Sanbaloolshe ayaa ahaa siyaasigii ugu nasiibka xumaa taliska Nabad sugidda islamarkaana lakulmay dharbaaxooyinkii ugu cuslaa ee uga yimaad Al Shabaab.